Soo dejisan - Bogga 2 - Geofumadas
GaliciaCAD waa goob ururinaysa qaddar wanaagsan oo waxtar u leh injineernimada, muuqaalka guud iyo dhismaha. Inta badan ilaha jira waa bilaash ama bilaash in la isticmaalo, in kastoo qaarkood u baahan yihiin xubinnimo, iyadoo xubin ka ah sanadkii 20 Euros oo ay ku jiraan CD leh 8,000 baloog. Haddii ay ahaato wada-hawlgalayaal, had iyo jeer ...
Helitaanka khariidado qaab vector ah oo waddan gaar ah waxay noqon kartaa degdegga dad badan. Akhrinta gogosha Gabriel Ortiz waxaan kaheley xiriirkan xiisaha leh maxaa yeelay maahan oo keliya inuu bixiyo khariidado qaabab .shp ah, laakiin sidoo kale kml, shabakad iyo mdb. Waa gData, oo ah adeeg ay kobciso Machadka Caalamiga ah ee Cilmi Baarista, ...
Aynu aragno waxa ay ujeeddadu tahay: Waxaan hayaa xogta isweydaarsiga beenta iyo masaafada, waxaana doonayaa inaan ku dhiso AutoCAD ama Microstation. Markii hore waxaan aragnay in AutoCAD ay leedahay qaabkeeda quudinta xogta noocan oo kale ah qaabka @dist <halka Microstation lagu sameeyo iyada oo loo marayo AccuDraw. Waa hagaag, iyada oo laga jawaabayo ...
Waqtiyadan waa adag tahay in la aqoonsado faraqa u dhexeeya hal-abuurka tikniyoolajiyadda iyo ku takrifalka la siin karo. Ku noqo 96 Khadka Tooska ah ee Xiriirinta ayaa soo ifbaxay, in kasta oo ay ahayd ilaa waqtigii Napster (1999) in wax badan laga sheegay dhaqamadaan loo yaqaan P2P, oo loo soo gaabiyo Peer-to-peer, oo ah nidaam ay ...
Boggan wuxuu leeyahay miiska tooska ah ee waxa dhacaya Maalinta Soo-dejinta, wuxuuna muujiyaa tirada soo dejinta, oo la cusbooneysiiyo ilbiriqsi kasta. Waa wax lala yaabo sida calaamaddaasi u socoto, waqtigan waxaa jira ku dhowaad hal milyan oo soo degsiis ah oo xarfaha cas ku muujinaya inta jeer ee la soo dejinayo daqiiqaddiiba ... 7,681 !!!! ...
Downloads, Internet iyo Blogs
Sidan ayaa loogu magac daray maanta (Juun 17), markii Mozilla Google ay qorsheyneyso inay ku guuleysato abaalmarinta Guinness ee tirada ugu badan ee soo degsashada Firefox, qeybta 3. Markaa haddaad horey u isticmaashay, waa wakhti ku habboon inaad cusbooneysiiso. .. iyo haddii aad wali isticmaaleyso Internet Explorer, waxaa laga yaabaa inay tahay waqti fiican ...
Hagaag, taasi waa tirada isticmaaleyaasha ee Firefox ay leedahay, taas oo inyar-ka-yar ay kasbatay dhulka ay ka timaaddo dulmiga Internet Explorer. Sida ku xusan tirakoobkeyga, 27% dadka soo booqda degelkan waxay adeegsadaan Firefox, layaab ma leh haddii nooc uu ku jiro 34 luqadood oo loo adeegsado 230 ...
Qoraalkii hore waxaan ku tusnay warqad Excel ah si loogu beddelo iskudhafyada Juqraafiyeed ee UTM warqad uu Gabriel Ortiz caan ku ahaa. Aynu hadda aragno qalabkan oo isla hawshaas ka qabanaya dhinaca kale, taas oo ah, isku duwidda qaabka UTM (Universal Traverso de Mercator) iyo ogaanshaha aagga, una beddelaya latitude ...
Jaantuskani wuxuu fududeynayaa in loo beddelo iskudhafyada juqraafi ee darajooyinka, daqiiqadaha, iyo ilbiriqsiyada isku-duwaha UTM 1. Sida loo galo xogta Macluumaadka waa in lagu farsameeyaa xaashida sare, habka ay ku yimaadaan qaabka loo baahan yahay. Dabcan, xaddidaadaha caadiga ah ee ku saabsan heerarka qiyamka la aqbalay waa in la ixtiraamo ...
Kordhinta ArcView 3x
In kasta oo ArcView 3x uu yahay nooc qadiim ah, haddana wali si ballaaran ayaa loo adeegsadaa illaa iyo hadda inta badan isticmaalka desktop, feylka qaabka inkasta oo uu yahay feyl 16-bit ah wali waxaa isticmaala barnaamijyo badan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka jiilkani helay ayaa ahaa shaqeynta hoos u dhigista kordhinta ee dhigeysa uloo ...
Google Earth iskuduwaha waxaa loo arki karaa seddex siyaabood: Darajooyinka jajab tobanle, daqiiqado, ilbiriqsiyo Darajooyin ah, iyo daqiiqado jajab tobanle UTM ah UTM ee Google Earth: 1. Sida loo arko iskuduwaha UTM ...
U adeegsiga GIS si loo abuuro aalad tallaalidda aaladda tallaalka